အာဏာစွန့် ရန် အတွက် မူဘာရက် ကို တပ်မှုးများ က ဖိအားပေးနေပြီ | Freedom News Group
by FNG on February 3, 2011	Image via Wikipedia
အာရပ် အာဏာရှင်များမှာ ပြည်သူလုထု ၏ ဒေါမာန်ဟုန် နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ ရာ သွေးပျက် ထိတ် လန့် ၍ ချူနာပါနာ ကျနေပြီ ဖြစ်သည်။ ပုံတွင် အာရပ်အာဏာရှင်များ ကို တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။အခုတော့ဒီဆရာကြီး တွေ လဲ ကာလနာ မြွေးပွေး ကိုက်နေပြီ့ Foreign Policy မှာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း အာဏာရှင်များ နှင့် အမေရိကန် သံတမန် ရေး ပုံများ ကိုကြည့်ရန် Related Articles
U.S. Role In Egypt (npr.org)
Foreign Policy: We Can’t Doubt Change In The Arab World (npr.org)
ROBERT SPRINGBORG IN FOREIGN POLICY: Game Over: Mubarak will hold on. While much of American me… (pajamasmedia.com)
“Egypt: Just 59 Years! Call that Stability?” and related posts (rubinreports.blogspot.com)
Egypt and the Realists (online.wsj.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	Tags: Egypt, Foreign Policy, Government, History, Hosni Mubarak, Middle East, United States	From: သတင်းဓာတ်ပုံ	← အကုန်သာ ရိုက်သတ် လိုက်
ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက် →
Total Visitors:Since 16 December 2008	8,378,676 hits
Shoot 'em all down with the flash of your pearly smile Honey but you met your match tonight Oh, that's right fb.me/2aVtK4cNt 12 hours ago
On the outskirts of town, under an age-old banyan tree, Tommy Tun's new Honda Fit is splashed with holy water and... fb.me/IaZaYoZU 12 hours ago
ခေတ်ကိုက လဘာဂျာခေတ် လှုသတ်သမားကပန်းချီပြခန်းဖွင့် အမှတ်မရှိ ဂျလေဘီတသိုက်ကတော့တရုံးရုံး fb.me/2Bqi339Jd 1 day ago
Get the daily news enter your mail Join 527 other followers